တစ်ခါစားပြီးတစ်သက်တမ်းတမ်းစွဲစေမယ့်အရသာကိုခံစားချင်ရင်တော့………….. – FoodiesNavi
အစားအသောက်ကောင်းတွေ???? ပေါများတယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ အောင်ကျော်ချမ်းအေးမန္တလေးမြို့တော်ကြီး? ကို သွားရောက်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေသွားစားသင့်တဲ့ ဆိုင်တွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်သန်းစားတော်ဆက် ? ကို Foodies Navi ကနေမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ရဲ့သွားလာရ ? လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ တည်ရှိတာကြောင့် ခရီးတစ်ထောက်ဝင်ရောက်အနားယူတဲ့သူတွေအတွက်လည်း သွားရောက်သုံးဆောင်ဖို့အဆင်ပြေစေမှာပါ။ သွားလည်ရင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းရှာဖွေနေသူတွေနဲ့ မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ပေမယ့် ဒီစားတော်ဆက်အကြောင်းမသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်လိပ်စာလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
-77th street , Between 36th street and 37th street , Mandalay.
ဒေါ်ခင်သန်းစားတော်ဆက်မှာဆိုရင် အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းလိုသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်အရသာကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာထမင်းဟင်းတွေအပြင် ?ထူးခြားကောင်းမွန်ပြီးအရသာတွေ့စေမယ့် တရုတ်ပန်းသေးဟင်းလျာတွေကို သုံးဆောင်နိင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်တော့ ဟင်းလျာတွေကတော့ ငါးအရိုးလွတ်ချဉ်မွှေး ၊ ကက္ကတစ်ခရမ်းဆော့စ် ၊ ကချင်မြေအိုး ၊ ဆိတ်ပေါင်းစပ် ၊ အမဲပေါင်းစတူး ၊ အဏ္ဏဝါဟင်းရည် ၊ ငါးသလောက်ချဉ်ဆီပြန် ၊ ငါးကောင်လုံးအစာသွတ် ၊ ငါးသင်္ဘော ၊ ပုဇွန်အစိမ်းသုတ် ၊ ပုဇွန်ငုံးဥချဉ်စပ်ဆော့စ် ၊ ငါးဂန္ဓမာ ၊ ငါးကြင်းမြီးနှစ်ရောင်ခြယ် ၊ ပုဇွန်ကင် ၊ ကြက်ကြွပ်ရသာစုံ ၊ ငါးမိသားစု ၊ ကြက်ကင် ၊ ဘဲကင် ၊ အမဲပြားကင် ၊ စတော်ဘယ်ရီကြက်ရေငွေ့ပေါင်း ၊ အမဲမာလာ ၊ ဂဏန်းကောင်လုံးချဉ်စပ် ၊ ရှန်ဟဲငါးကုန်းဘောင် ၊ ယိုးဒယားအမဲထောင်းသုပ် စတဲ့ဆန်းသစ်ပြီးလူကြိုက်များတဲ့ ဟင်းလျာအစုံစုံကိုသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ…….ဟင်းလျာနာမည်နဲ့ဟင်းလျာပုံလေးတွေ ကြည့်ရုံနဲ့တင်တစ်ခါတည်းအပြေးအလွှားသွားစားချင်မှာအသေအချာပဲနော်? ကိုယ်တိုင်သွားစားကြည့်ရင်လည်း တစ်ခါစားဖူးရုံနဲ့ထပ်ခါတလဲလဲ တမ်းတမ်းစွဲသွားစေမယ့်စားတော်ဆက်လေးပါပဲ။ တစ်ခါစားပြီးနှစ်သက်လို့ နောက်တခါလာစားဖို့အတွက် ကြိုတင်ဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ဖို့ Menu သေးသေးလေးတွေကိုလည်း တခါတည်းယူသွားလို့ရသေးတယ်နော်။ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီထိဖွင့်တာဆိုတော့နေ့လည်စာပဲစားစားညစာပဲစားစားသင့်လျော်တဲ့ဆိုင်လေးပါပဲနော်။
Image Source : www.facebook.com/dawkhinthanrestaurant
In Restaurant Guides Tagged Chinese Food, Myanamar Traditional Foods Leaveacomment